रूपाकोट: प्रकृतिको नजिक, संस्कृतिको समीप
कात्तिक १६, २०७५
‘हेर्दा राम्रो माछापुच्छ्रे...’ बोल भएको कुमार बस्नेतको स्वरको मीठो गीत नेपालीहरूले दशकौंदेखि सुन्दै, गुन्गुनाउँदै आएका छन् । ‘माछापुच्छ्रे भन्नु मात्रै धौलागिरी अल्गो...’ भन्ने बोलको अर्को गीतमा पनि होचै हिउँचुली माछापुच्छ्रेको चर्चा भेटिन्छ । कवि, गीतकारहरू पोखरा उपत्यका पसेपछि बढी सिर्जनशील भैदिए भने त्यो आश्चर्य पनि भएन । किनभने तिनले त्यहाँबाट नीलगिरी, अन्नपूर्ण र लमजुङ समेतका हिमालहरूको दृश्यावलोकन गर्न पाउँछन् । स्वच्छ हावाको स्पर्शमा परेपछि अन्य नेपालीमा पनि कवित्वभाव पलाउँछ भन्ने अनुमान मजस्ता धेरैले गर्न सक्छन् ।
भन्नै परेन, सगरमाथाको काखमा दर्जनौं हिमाल र उपत्यका छन् जसले मौलिक मनमोहक दृश्यावली उपलब्ध गराउँछन् । अर्थात् ‘धूवाँरहित उद्योग’ भनिने पर्यटनको सम्भावना नेपालैभरि छ । पानी अर्को स्रोत हो जसले बिजुली, सिंचाइ र पिउने पानीको आपूर्तिबारे मुलुकवासीलाई ढुक्क गराउन सक्छ । तर परिचालन गर्ने सीप र पाखुरी नभैकन न पानीको उपयोगिता हुन्छ, न त पर्यटन नै फस्टाउन सक्छ । तिलको गेडामा तेल त हुन्छ तर नपेलीकन थोपो झर्दैन भन्ने मान्यताबाट हामी सबै परिचित छौं ।
प्रकृति, पानी र पर्यटनको संयोजन गरे एउटा भरपर्दो सिलसिलाको थालनी गर्न सकिँदो हो भन्ने सपना, रटना कतिपय नेपालीको हुनसक्छ । यस्तो संयोजन गरेरै देखाउने श्रेय भने अहिलेको प्रसङ्गमा कास्की रूपाकोटका पुष्पराज अधिकारीलाई दिन सकिन्छ । पारि, मास्तिर हिमालको दृश्य र डिलमुन्तिर रूपाताल र बेगनास तालको जल एकैपल्ट हेर्न पाइने चाँजो मिलाइएको छ रूपाकोटको त्यस डाँडामा । समुद्री सतहबाट क री ब १,१०० मिटरको उचाइमा रहेको ढिस्को सम्याएर ठड्याइका संरचना नै समग्रमा आजको ‘रूपाकोट रिसोर्ट’ हो । त्यहाँ नेपाली शैलीका नौवटा घरमा ४२ कोठा छन्‌ जसमा बस्ने पाहुना (पर्यटक) ले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सत्कार र सुविधा पाउँछन् । र, मौसम सफा भएको दिन स्वदेशी-विदेशी सबैले सहजै सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्न पाउँछन् । कुनै समय दार्जीलिङ पुगेका यात्रुहरू सूर्योदय हेर्न झिस्‌मिसेमै उठेर ‘टाइगर हिल’ तिर सोझिएका मोटरमा सवार हुनेहरूको भीडमा म पनि थिएँ । प रार साल इण्डोनेसियाको बाली टापूमा समुद्रीकिनारबाट सूर्यास्त हेर्ने घण्टौं प्र तीक्षा गर्नुपरेको सम्झना हुन्छ ।
[यहाँ चर्चित रूपाकोटका अधिकारी यस लेखका लेखक अधिकारीका नातेदार होइनन्]
फेवातालले चर्चेको पोखरा शहरबाट आग्नेय कोणतर्फ २२ किलोमिटरको दूरी तय गरेपछि पुगिने रूपाकोट रिसोर्ट करिव दुईशय रोपनी जमीनमा फैलिएको छ । रिसोर्ट सञ्चालन गरेको अर्को महिना चारवर्ष पूरा हुँदैछ; निर्माणको काम त्यसको दुईवर्ष पहिले थालिएको थियो । ‘नेपालीपन झल्काउने नाममा अतिथिलाई दिनुपर्ने सेवा-सत्कार र सुविधा घट्न नजाओस् भन्नेमा म सचेत छु’, पुष्प अधिकारीको कथन छ । तर आफूभन्दा अघि पर्यटनक्षेत्रमा प्रवेश गरेका कर्ण शाक्य, भरत बस्नेत र अन्य व्यवसायीहरूका मुलुकको मौलिकता सम्बन्धी प्राथमिकताबारे टीका-टिप्पणी गर्न अधिकारीको रुचि देखिँदैन । रूपाकोट रिसोर्टले अहिले ७५ जनालाई रोजगारी दिएको छ । सरकारले व्यवसायीबाट कर (राजस्व) पाउँछ । विस्तारको क्रममा यिनमा क्रमिक वृद्धि अपेक्षित नै भयो ।
रूपाकोटका रिसोर्टका ग्राहक ‘खर्च गर्नसक्ने’ विदेशी पर्यटक त हुन् नै, मुलुकमै बसेर सम्पन्नताको खुड्किलो उक्लिएका नेपालीहरू पनि पर्छन् । बेला-बखत ओहोदाधारी नेताका परिवार र उच्चपदस्थ कर्मचारी रूपाकोटमा वास बसेका छन् । विदेशमा रोजगारी गरेर नेपालमा विदा मनाउन आउने नेपाली/नेपालीभाषी एकरात रूपाकोटमा बसेर बिहान सूर्योदय हेर्दाको अनुभव समेट्न चाहन्छन् । यता, पुष्प अधिकारीको सम्पर्क-सञ्जाल अझ बाक्लो छ । अब उनलाई यस रिसोर्टलाई एक-दुई रात बास बस्ने ठाउँको रूपमा सीमित गराउन मन छैन । हिमाल र तालको यो एकीकृत दुर्लभ दृश्य हेर्न आउनेहरूको संख्या एकपटकमै हजारौंमा हुने गरोस् भन्ने उनको उद्देश्यलाई अन्यथा ठान्नु पनि भएन । छिमेकका चीन र भारतबाट भित्रिन सक्ने पर्यटकहरूको ताँतीलाई पनि हेक्का राख्नैपर्ने हुन्छ ।
रूपाकोटलाई क्षेत्रीयस्तरमा हुने-गरिने सार्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको स्थल बनाउने अध्यक्ष अधिकारीको इच्छा छ । नेपालकै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गर्दाको हालैको सफलताले अधिकारीको हौसला बढ्नु स्वाभाविक छ । ‘ आखिर मलाई निजी आर्जन बढाउने लोभले भन्दा देशको आर्थिक उन्नतिमा केही योगदान गरौं भन्ने भावनाले बेल्जियमको बसाइ छोट्याउन प्रेरित गरेको हो,’ आफ्ना योजना, आकांक्षाबारेका जिज्ञासा आउँदा जवाफमा अधिकारी भन्ने गर्छन् । अधिकारी आफ्नो परिवारलाई युरोपमै छोडेर एक दह्रो प्रतिबध्दताका साथ नेपाल फर्केको कुरा रूपाकोटको विकासबारे गम्भीर चासो राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई सुनाउन चुक्दैनन् । ‘मेरो लागि बेल्जियम त बेला-बेलामा आऊ-जाऊ भैरहने ठाउँ हो ’।
रिसोर्टमा बैंकबाट लिएको रु.२५ करोडभन्दा बढी लगानी भैसकेको छ, र विस्तारको क्रममा थप कर्जा लिँदै जानुपर्ने अवस्था छ । तर अधिकारी तत्कालको आवश्यकता मात्र पूरा गर्ने किसिमको विस्तारमा आफूलाई सीमित गर्ने पक्षमा छैनन् । छेउछाउमा सडक निर्माण, सुरक्षा, भरपर्दो इण्टरनेट सेवा तत्कालका जरुरत हुन् । यी कुराको बन्दोबस्त त यथासमय भैहाल्ला । रूपाकोटकै रैथाने भएको हुनाले अधिकारीलाई स्थानीय बासिन्दाको सहयोगबारे ढुक्क हुन सजिलो भएको हो । स्थानीय सीप र मेहनतलाई राज्यबाट प्रोत्साहन मिल्ने कुरामा उनी आशावादी छन् ।
पुष्प अधिकारीलाई आमरूपमा बुझिने ‘पर्यटन व्यवसायी’ मात्र ठान्न मिल्दैन । उनीसित सिङ्गो मुलुकलाई आर्थिक समृध्दिका खुड्किला उकाल्दै लैजाने दूरदृष्टि र महत्वाकांक्षी योजना छन् जसका बारे उनी हाल पदमा पुगेका अधिकृत एवं विज्ञ, विशेषज्ञहरूसँग सार्थक संवाद गर्ने जानकारी र खुबी राख्दछन् । प्राकृतिक गुफा र मन्दिर तथा स्तुपका आकर्षणले भरिएको पोखरा उपत्यकालाई गण्डकी प्रदेशको आधुनिक सर-सुविधायुक्त शहरमा परिणत गर्ने उनको पहिलो सोच छ । र, त्यसको थालनी अहिलेको रूपाकोट रिसोर्टको सिधा मुन्तिर रहेका रूपा ताल र बेगनास ताल वरिपरिको विकासबाट गर्न चाहन्छन् । यी दुई तालको बीचको ठूलो ढिस्कोलाई उपयुक्त ठाउँमा काटेर दुबै ताललाई एक-अर्कोसित ‘नायग्रा फल्स’ को ढाँचाबाट जोड्ने र त्यहाँ जलयान चलाउने अनि वरिपरिको जमीनमा दुइटा ‘ताल शहर’ (लेक सिटिज) बसाउने । हाल खेत,बारीमा असुरक्षित तरिकाले बनाइएका घर-टहरालाई हटाई एकै ठाउँमा आवासक्षेत्र तोक्ने र खाली भएको जग्गामा अन्न, तरकारी र फलफूल खेती गराउने । हो, यस्ता योजना व्यक्ति विशेषले पार लगाउन सक्दैन; तसर्थ सरकारबाट सक्रिय सहभागिता एवं प्रोत्साहनको अपेक्षा गरिन्छ नै---अधिकारी यसबारे खुलस्त हुन्छन् ।
हुन पनि रूपाकोटमा सुविधायुक्त रिसोर्ट सञ्चालन गरेर आफ्नो क्षमता र कार्यकुशलता प्रदर्शन गरिसकेको हुनाले पुष्प अधिकारीको सोच तथा योजनालाई हलुका ढङ्गले हेर्न मिल्दैन । सीमित स्रोत-साधन र जनशक्तिको भरमा पनि काम गर्नसक्ने उनको योग्यता त रूपाकोटले प्रमाणित गरिसकेको छ । अधिकारीले आफ्नो साख र विश्वसनीयता स्थापित गरिसकेका छन् । अनि, आखिर रूपाकोटमा निर्मित संरचनाहरू उडेर बेल्जियम पुग्ने होइन; नेपालमै रहन्छन् ।
रूपाकोटको शैलीमा विकास गर्न सकिने ठाउँ देशका अरू भागमा कति होलान् ? उनको उत्तर हुन्छ : ‘दर्जनौंको संख्यामा छन् नि’। एक दृष्टान्त हो रारा दह । यो निकै फराकिलो ताल हो । यसको वरिपरि हिमाली भेग सुहाउने २०० वटा रिसोर्ट खुल्न सक्छन् । नजिकैका पहाडी जिल्लामा पशुपालन गर्न सकिन्छ । त्यहाँ उत्पादन हुने मासु स्वदेशमा खपत र विदेशमा निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । देशका अन्य भागमा पनि यस्ता सम्भावना भएका स्थानहरू छन्; सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गराउने काम भने सरकारको हो ।
राजनीतिबाट देशसेवा गर्न अघिसरेका हौं भन्ने सयकडौं नर-नारीसित पुष्प अधिकारीको चिनारी छ; कतिपयसँग सङ्गत पनि छ । उनी साविकमा एमालेका समर्थक हुन् । तर एकीकृत भैसकेपछिको पार्टीबारे उनको किटान धारणा छैन । आफैं झ्याम्मिएर नजाने तर परिस्थितिले तानेमा चुनावी राजनीतिबाट पछि नहट्ने अधिकारीको सोचाइ छ । उनलाई २०६२-६३ को आन्दोलनमा हासिल भएका भनिने तीनटा उपलब्धि---गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता—मध्ये संघीयता मात्र ठीक लागेको छ । ‘यसले शक्ति विकेन्द्रीकरणलाई संस्थागत रूप दिन्छ; जनप्रतिनिधि, मन्त्रीहरूको संख्या बढ्दा खर्च बढ्छ भनेर अत्तालिनु हुँदैन । किनभने थप स्रोतको परिचालनबाट अतिरिक्त ठानिएको आर्थिक भार खेप्न अवश्य सकिन्छ’।
कुनै दिन पुष्प अधिकारी प्रणाली विकासको परिप्रेक्ष्यमा निर्णायक ठाउँमा पुगेमा दुई-तीनटा काममा लागिपर्ने अपेक्षा अहिले नै गर्न सकिन्छ : १२ कक्षासम्मको पढाइ नि:शुल्क गर्ने र निजी सरकारी विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम अनुसार पढाउने । हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने । अधिकारीलाई थाहा छ, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था मिलाउने बित्तिकै नेपालीका आधाजसो रोगव्याधि आफैं समाप्त हुनेछन् ।
निर्दयी मान्छे : सेतुलाई रड र लाठीले हानेर तत्कालै...
निष्ठुरी दैव ! यस्तो दुःख कसैलाई नपरोस् ...
पतिको कमाइले स्टाफ नर्स पढेर जागिर पाएपछि ‘हैसियत...
पाँचखालका मनकारी मेयर : असहाय वृद्धको ऋण तिरिदिए...
शाहरुखले भने, 'म मुस्लीम, पत्नी हिन्दू अनि सन्तान हिन्दूस्तान'
ठाकुरबाबामा जंगली हात्तीको आतंक, तीन घर भत्कायाे
२१ तोला सुनसहित युवक पक्राउ
पृथ्वीनारायणका २१८ प्राध्यापक १४ वर्षदेखि ज्यालादारीमा, उत्रिए आन्दोलनमा
बागमतीको प्रदेशसभामा दुई विधेयक टेबुल